Taaj Qarnigii 18-aad Laga Xaday Itoobiya Oo Dib Loogu Soo Celinaya Iyo Cidii Xaday Taajkaasi - Borama News Network
Taaj laga xaday dalka Itoobiya Qarnigii 18-aad ayaa ugu dambeyntii suurogashay in dib loo helo, waxaana dib loogu celinaya dalkaas kaddib markii 21 sanno oo Taajkan dib looga helay guri ku yaal dalka Netherlands.
Nin u dhashay Itoobiya oo lagu magacaabo, Sirak Asfaw oo uu u qaxay dalka Netherlands dabayaaqadii toddobaatamadkii ayaa arkay nin Taajka ku sita boorsad, markiiba, wuxuu ogaaday in lasoo xaday.
Maamulka guriga uu joogay ninkii sitay Taajka ayaa gacanta ku hayay isla markaasna ka shaqeeyay sidii dib loogu celin lahaa. “Waxaa la joogaa xilliggii ugu haboonaa ee dib loo celin lahaa Taajka si ay dib ula wareegaan dadkii lahaa oo Itoobiyaan ah” ayuu u sheegay BBC-da
Taajkan wuxuu kamid yahay Taajajka dhifka iyo naadir ah ee laga helo dunida, Waxaana Taajka lagu ilaalinaya guri si weyn ammaankiisa loo adkeeyay tan iyo inta dib looga celinayo Itoobiya.
Sirak Asfaw wuxuu ka qaxay Itoobiya sannadkii 1978-dii, wuxuu ka cararay qalalaasihii siyaasadeed ee maamulkii Derg ee Itoobiya taas oo awoodda la wareegtay sannadkii 1974-kii, dowladdaas waxay ku dhaqaaqday howlgal ay boqolaal kun ku dhinteen halka dad badan ay dalka isaga carareen.
Ninka wuxuu Itoobiyaanka gaaro Netherlands ku qaabili jiray gurgii uu degnaa oo ku yaal Rotterdam sanadihii 1980-kii iyo 1990-kii.
Sannadkii 1998-dii, wuxuu la kulmay nin boorso ku sita Taajka, wuxuu hor joogsaday ninka isla markaasna wuxuu ku adkeystay in Taajka lasoo xaday dib loo celiyo. “Inta badan dadka dan maka laha dhaqanka dhaxalka ah, waxaan daacad u ah Itoobiya” ayuu yiri Sirak Asfaw.
Markii, ra’iisul wasaare uu dalka ka noqday Abiy Axmed, Sirak wuxuu go’aansaday in Taajkan dib loogu celiyo Itoobiya, Wuxuu la xidhiidhay nin ka shaqeeyo farshaxanka kaas oo kala shaqeeyay sidii dib dalka loogu soo celin lahaa Taajka.
“Jabuuti Somaliland Waxay La Doonaysaa Samali Wayn” Xisbiga Ucid Oo Ku Dhegay Dawlada Jabuuti
Muuse Biixi Oo Kulan La Qaatay Safiiro Ka Socda Midawga Yurub Oo Hargaysa Soo Gaadhay Iyo Waxyaabaha Ay Ka Wada Hadleen
Wasiirka Qorshaynta Oo Shaaciyay Cida Dhisaysa Dugsiga Farsamada Ee Burco
Banaanbax Lagu Taagerayo Raisul Wasaraha Ethiopia Oo Jigjiga Ka DHacay Iyo Madaxwayne Cagjar Oo Ka Hadlay